Gool FM oo iska xaadirisay finalka tartanka warbaahinta gobolka Banaadir… +SAWIRRO – Gool FM
Gool FM oo iska xaadirisay finalka tartanka warbaahinta gobolka Banaadir… +SAWIRRO
(Muqdisho) 16 Mar 2020. Gool FM ayaa iska xaadirisay finalka tartanka warbaahinta gobolka Banaadir kaddib markii ay kaga adkaatay Idaacada Risaala 6-1, kulan aad u xiiso badan ay wada ciyaareen galabta.
Tartanka oo si xiiso leh uga soconaya xarunta degmada Howl-wadaag ayaa waxaa ka qeyb galaya dhowr xarumo warbaahineed ee ku yaala Muqdisho, waxaana uuna uu marayaa heerka bugbaxda eewareega afar dhamaadka, iyadoo ay galabta kulan xiiso badan wada ciyaaray idaacadaha Gool FM iyo Risaala.
Xiddigaha Gool FM ayaa hoggaanka u qabtay ciyaarta, waxaana hogaanka u dhiibay Sabca oo ciyaarta ka dhigay 1-0.
Wiilasha Gool FM oo galabta soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah ayaa waxay goolasha ka heshay 4 gool oo Sabca ah, iyo 2 gool oo Shafinho ah.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 6-1 ay ku adkaatay Gool FM, waxayna sidaas ugu gudbeen kulanka finalka ee tartanka warbaahinta gobolka Banaadir.
Gool FM ayaa sugi doonta kooxdii soo adkaata SNTV iyo Universal TV oo barri ku balansan salaxa xarunta degmada Howl-wadaag.
“Liverpool waa kooxda ugu fiican taariikhda horyaalka Ingiriiska” – Robbie Fowler
Coronavirus oo saameyn ku yeellan kara heshiiska Hakim Ziyech ugu soo biirayo Kooxda Chelsea